Madaxweynihii hore ee Ivory Coast oo loo wareejiyay Maxkamada Danbiyada Dagaalka ee ICC – SBC
Madaxweynihii hore ee Ivory Coast oo loo wareejiyay Maxkamada Danbiyada Dagaalka ee ICC
Diyaaradii uu la socday Madaxweyhiin hore ee wadanka Ivory Coast Laurent Gbagbo ayaa ka degtay Magaalada Rotterdam ee Wadanka Holland halkaasi oo lagu wareejin doono Maxkamada Danbiyada Dagaalka ee ku taala Magaalada Hague.
Mr. Laurent Gbagbo ayaa ka socdaalay Magaalada ku taala woqooyiga wadanka Ivory costa ee Korhogo, ka dib markii uu soo baxay warnka lagu soo xiray mr Gbagbo oo loo haysto danbiyo la xiriira inuu geystay Danbiyo Dagaal.
Maxkamada Danbiyada Dagaalka ee ICC ayaa mudooyinkan waxay waday baaritaanka danbiyada loo haysto Laurent Gbagbo kuwaasi oo ka dhacay Doorashadii sannadkii hore lagu murmay ee ka dhacday wadanka Ivory Coast.
Hogaamiyihi hore ee wadanka Ivory Coast Laurent Gbagbo waxaa uu mudooyinkii ugu danbeyay ahaa nin ku jira xabsi guri tan iyo bishii April ee Sannadkan ka dib markii si awood ku jirto ay dowladu uga awood roonaatay maamulka Wadanka oo dhan .
Eedaha Madaxweyhinihii hore ee wadankaasi Ivorycoast ayaa waxaa ka mid ah in ciidamadiisa ay kufsi boob iyo dhac bareer ah u geysteen dadka wadankaasi Ivory coast
Danbiyada loo haytso Gbagbo hadiii lagu helo waxaa uu muteysan doonaa xukun adag oo ku aadan in lagu ciqaabo danbiyada loo haysto.